अक्सफोर्डको कोरोना भ्याक्सिनको अपडेट के छ ? - Sacho Post
अक्सफोर्डको कोरोना भ्याक्सिनको अपडेट के छ ?
२०७७ भाद्र २, मंगलवार ०८:५१ बजे
काठमाडौं। रुसले कोरोनाभाइरसको सफल भ्याक्सिन विकास गरेको घोषणा गरिसकेको छ । उसले यो भ्याक्सिनलाई स्वीकृति पनि दिइसकेको छ तर विश्वभरका वैज्ञानिकहरुले यसलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यो भ्याक्सिनको पर्याप्त क्लिनिकल ट्रायल नभएको, तेस्रो चरणको ट्रायलअघि नै भ्याक्सिनलाई स्वीकृति दिइएको, भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलको पर्याप्त डाटा जारी नगरिएको जस्ता कारणले विश्वभरका वैज्ञानिकले यो भ्याक्सिनलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । रुसकै विशेषज्ञले समेत यसको आलोचना गरिरहेका छन् ।
रुसको भ्याक्सिन विश्वसनीय नभएसँगै विश्वको चासो बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको भ्याक्सिनतर्फ बढेको छ । विश्वभरका वैज्ञानिकले विश्वास गरेको र अत्याधिक अपेषा गरिएको यो भ्याक्सिनको पछिल्लो अवस्थाबारे चासो बढेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको यो भ्याक्सिन केही महिनामै सफल घोषित भएर स्वीकृति पाउने पछिल्लो रिपोर्टमा जनाइएको छ । स्काइन्यूजले २०२० को अन्त्यसम्ममा वा २०२१ को सुरुवातमा यो भ्याक्सिनको निर्णायक ट्रायलको नतिजा आउने जनाएको छ ।
बेलायतको भ्याक्सिन टास्क फोर्सका प्रमुख केट बिंघमले यो वर्षको अन्त्यसम्म अक्सफोर्डको कोरोना भ्याक्सिन र जर्मनीको कोरोना भ्याक्सिन तयार हुन सक्ने बताएकी छिन् । बिंघमका अनुसार बेलायतमा करिब १ लाख मानिसहरु ट्रायलमा सहभागी हुन तयार भएका छन् । उनले स्काइ न्यूजसँग कुरा गर्दै ट्रायलको लागि अझै धेरै स्वयंसेवकलाई अगाडि आउन अपिलसमेत गरेकी छिन् ।
उनले भनिन् ‘मलाई लाग्छ यही वर्ष भ्याक्सिन तयार हुनेछन् । दुई क्यान्डिडेट भ्याक्सिनमा क्षमता छ – एक जो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा तयार भइरहेको छ र अर्को जुन जर्मनीको कम्पनी बायोएनटेकले तयार गर्दैछ ।’ सबै कुरा ठिक भएमा दुवै भ्याक्सिनले यसै वर्ष स्वीकृति पाउने र यसै वर्ष प्रयोगका लागि उपलब्ध हुन थाल्ने उनले बताइन् । यसबाहेक अमेरिका र चीनले विकास गरेका भ्याक्सिन पनि तेस्रो र निर्णायक चरणको ट्रायलमा छन् र उनीहरुको अन्तिम नतिजा पनि यसै वर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
देश कोरोना मुक्त नहुँदासम्म तलब नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा
कोरोना बाट आज थप एकको मृत्यु,